गण्डकी प्रदेश नीति योजना आयोग सदस्यमा अधिकारी नियुक्त – हिमाली आवाज
गण्डकी प्रदेश नीति योजना आयोग सदस्यमा अधिकारी नियुक्त
हिमाली आवाज	 २०७८ असार २२ गते ,मंगलवार ०७:३५ मा प्रकाशित
हिमाली आवाज । गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा तनहुँ म्याग्देका डा. सुवास अधिकारी नियुक्त भएका हुनुभएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अधिकारीलाई आयोग सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अधिकारीलाई आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले सोमबार सपथ ग्रहण गराउनुभयो । आयोगका अध्यक्ष समेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री कुमार खड्काको उपस्थितिमा उपाध्यक्ष काफ्लेले सपथ गराउनुभएको हो । सपथमा मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोला, मन्त्रालयका सचिव लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
३८ वर्षे अधिकारी युनिभर्सिटी अफ चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सेजबाट वातावरण विज्ञानमा विद्यावारिधि हुनुहुन्छ । उहाँले भारतको बैंगलोर युनिभर्सिटी भारतबाट माइक्रो बायोलोजीमा स्नातक गर्नुभएको छ ।
युनिभर्सिटी अफ चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सेजबाट एक्सलेन्ट इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट अवार्ड समेत प्राप्त गर्नुभएका उहाँसँग जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पस पोखराको माइक्रोबायोलोजी र बायोलोजी विभाग प्रमुखको कार्यानुभव छ । उहाँले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा विज्ञान प्रविधि तथा अन्य विषयहरुमा अनुसन्धानमूलक दर्जनौं लेख प्रकाशन गर्नूभएको छ ।
आफ्नो अध्ययनको क्षेत्र अनुसार अनुभवको प्रयोग गर्दै प्रदेशलाई अझ अब्बल बनाउने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभयो । आयोगमा असार ५ गते नै उपाध्यक्षमा तनहुँका डा. रघुराज काफ्ले नियुक्त हुनुभएको थियो । ३ सदस्यीय आयोगमा १ पद अझै खाली नै छ ।